Abarhwebi bexesha elizayo beZorhwebo ngoMeyi ka-2022 -Funda ukuRhweba
Abarhwebi bexesha elizayo baFunda esi sikhokelo sipheleleyo se-2022
Ixesha elizayo Abarhwebi, ukuba ujonge ukufikelela kubuninzi beetriliyoni zeepawundi kwindawo yokuthengisa- cinga kwakhona. Eli candelo lithile lendawo yezemali ligcinelwe imali yeziko. Ngale nto ithethwayo, iindaba ezimnandi zezokuba usengakwazi ukutyala imali kwii-asethi ezifanayo eziza kulandela umkhondo-kodwa ngohlobo lwee-CFD.
Cinga ngokwendlela ye ioyile kunye negesi, igolide, Ingqolowa, kunye nee-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin. Isiseko sokwenza i CFD isebenza ngendlela efanayo nekhontrakthi yexesha elizayo, kodwa ngumahluko omnye ophambili-akukho mhla wokuphelelwa. Kananjalo, ungahamba ixesha elide kwaye mfutshane kwisixhobo sakho osikhethileyo, kunye nokusebenzisa amandla.
Nangona kunjalo, kweli nqaku, sijonga i-Best Futures Brokers ka-2022. Onke amaqonga ethu alawulwayo ajongana nendawo yabathengi abathengisa ngee-CFDs, ke uya kuba nakho ukurhweba ngokukhululekileyo kwikhaya lakho ngokulula.
Kwimo yayo esisiseko, ikamva likuvumela ukuba uqikelele kwixabiso elizayo leasethi ngaphandle kokuba ufuna ukuthatha ubunini. Ubuninzi bexesha elizayo bulawulwa zizinto ezifana neoyile, igesi yendalo, igolide, ingqolowa kunye nombona. Isizathu esigqibeleleyo soku kukuba urhwebo lwempahla ngokwendlela yesiko iya kuba yinto yamalungiselelo amabi.
Ngobungqongqo, ukuzama ukurhweba nge- $ 5,000 yeebhayile zeoyile ebonakalayo kwaye emva koko uzithengise iiyure ezimbalwa emva koko ngekhe kusebenze. Endaweni yoko, umtyali mali onobuqili uza kuqalisa urhwebo olungentla ngokuthenga okanye ukuthengisa isivumelwano sexesha elizayo. Njengoko besikhankanyiwe, ikontrakthi yexesha elizayo ikunika ukhetho lokuya 'kubude' okanye 'kufutshane'.
Ke, ukuba ucinga ukuba ixabiso leasethi oyikhethileyo- yithi, ingqolowa-izonyuka kwiintsuku ezizayo, iiveki, okanye iinyanga, uya kuba 'mde'. Ukuba ucinga okwahlukileyo-ke uya 'kufutshane' ngokubeka iodolo yokuthengisa. Oku kukunika ubhetyebhetye ngakumbi kunee-asethi eziqhelekileyo njengezitokhwe kunye nezabelo, ubuncinci kuba ugcina imali kwinkampani kuba ufuna inyuke ngexabiso.
Ngale nto ithethwayo, iikhontrakthi zexesha elizayo zizixhobo eziphucukileyo ezigcinelwe indawo yotyalo-mali yeziko. Kungenxa yokuba ababoneleli bexesha elizayo babeke ubuncinci bobungakanani beqashiso, elihlala lingaphezulu kwinani le-6. Ngethamsanqa, kukho inani labathengisi bexesha elizayo abasebenza kwisithuba se-Intanethi esikunika ukufikelela kwiimarike ezifanayo, nangona kunjalo, ngohlobo lwee-CFD.
Iinkonzo kunye neengozi zeCond Contracts
Gcina imali kwi-asethi ngaphandle kokufuna ukuthatha ubunini
Ilungele ngokugqibeleleyo iiasethi ezinzima njengeoyile, igolide kunye nengqolowa
Unokhetho lokuhamba ixesha elide okanye elifutshane
Uninzi lwabathengi bexesha elizayo likuvumela ukuba ufake isicelo
Ungayibiyela ngokulula iiasethi
Iinkonzo zabarhwebi bexesha elizayo kwindawo yokuthengisa ngee-CFD
Imarike elawulwayo kakhulu
Iikontrakthi zemveli zexesha elizayo zigcinelwe indawo yeziko
Into entsonkothe ​​ngakumbi kuneeasethi zemveli ezinje ngezitokhwe kunye nezabelo
Isebenza njani ikamva?
Kuninzi okunokufundwa ngekamva, kungoko kungcono ukuba sidilize izinto ezisisiseko kancinci-kancinci.
Okokuqala nokuphambili, ikamva lemveli liya kuhlala linomhla wokuphelelwa. Ngelixa oku kungasoloko kusetwa elityeni, kuninzi lweziganeko ikontrakthi yexesha elizayo iya kuphelelwa liinyanga ezintathu.
Nangona kunjalo, kwimeko ye- CFD kwikamva, awusoze uphele umhla wokuphelelwa. Oku kukunika ubhetyebhetye ngakumbi, njengoko unganyanzelwanga ukuba ukhuphele kutyalo-mali lwakho xa ikhontrakthi ikhula.
Nokuba yeyiphi iasethi engaphantsi, abathengisi bexesha elizayo bahlala bevumela ukuba uhambe ixesha elide okanye elifutshane. Oku kwenza ukuba ikamva libe lolukhetho olufanelekileyo ukuba ujonge ukuqikelela ngeasethi eyehla ngexabiso.
Xa ungena kwisivumelwano sexesha elizayo, uyavuma ukuthenga le asethi, kwaye uyithengise ngomnye umhla. Ngokufanayo, ukuba uza kufutshane, uyavuma ukuyithengisa, kwaye uphinde uyithenge ngelinye ixesha kwixa elizayo.
Nanku apho izinto zifumana umdla. Wena, njengomnini wesivumelwano sexesha elizayo, ungaphuma kurhwebo lwakho nangaliphi na ixesha elinikiweyo-okoko nje oku kungekadluli komhla wokuphelelwa kwesivumelwano.
Umzekelo, ukuba uhambe ixesha elide kwikhontrakthi ye-oyile kunye nexesha lokuphela kweenyanga ezintathu, nokuba unenzuzo okanye akunjalo, uya kunyanzelwa ukuba uthengise ikhontrakthi kwakuba kuphela ixesha leenyanga ezintathu.
Xa kufikwa kwizibonda, ikamva lisebenza ngendlela eyahlukileyo ngokupheleleyo kwiiasethi zemveli. Kungenxa yokuba ikamva labarhwebi akufuneki ukuba uthenge iikontraki zizonke, kodwa kuya kufuneka uhlangane nobuncinci besayizi.
Umzekelo, masithi utyale imali kwisivumelwano seBitcoin. Umboneleli unokuxabisa ikhontrakthi enye nge- $ 10,000, kwaye afune ukuba uthenge ubuncinci beekhontrakthi ezingama-25. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka utyale i- $ 250,000 ukuze ujongeke.
Kwakhona, awuzukufuna ukuzikhathaza ngale nto njengomrhwebi othengisayo, njengoko abathengisi bexesha elizayo esincomela ukuba bakwenze kweli phepha likuvumela ukuba utyale imali ngezibonda ezincinci ngeCFDs.
Benza njani amaXesha amva abaRhwebi ukubala iinzuzo kunye nokulahleka
Ukucacisa inkungu, makhe sijonge umzekelo wentengiso yexesha elizayo enokubonakala ngayo. Sikhethe ukusebenzisa amanani angenamkhethe ukugcina umzekelo usisiseko.
Masithi ufuna ukuhamba ixesha elide kwixabiso leoyile, ke uthatha isigqibo sokutyala imali kwisivumelwano sexesha elizayo.
Ikhontrakthi yexesha elizayo inexabiso lokuvula le- $ 29 nge-barrel, kunye nomhla wokuphela kweenyanga ezintathu. Njengoko ucinga ukuba ixabiso leoyile liya kunyuka, ubeka iodolo 'yokuthenga'.
Ukuze ufezekise ubuncinci bexabiso lotyalo mali lomthengi, uthenga izivumelwano ezili-100. Oku kufikelela kwi- $ 2,900 (iikontrakthi ezili-100 x $ 29).
Kwiinyanga ezimbini kwisivumelwano, ixabiso leoyile liye lafika kwi-40.60 yeedola, ke uthatha isigqibo sokufaka imali kwiingeniso zakho ngokufaka i-odolo 'yokuthengisa'.
Njengoko uthengise ikhontrakthi nganye nge-40.60 yeedola, kodwa wahlawula nje i-29 yeedola, oku kufikelela kwinzuzo ye- $ 11.60 ngesivumelwano ngasinye. Njengoko kwafuneka uthenge iikontrakthi zexesha elizayo ezili-100, inzuzo yakho iyonke iyi- $ 1, 160 ($ 11.60 x 100 yezivumelwano).
Kumzekelo ongentla, uthathe isigqibo sokukhupha izivumelwano zexesha elizayo kwiinyanga nje ezimbini kwisivumelwano. Oku kulungile ngokugqibeleleyo, njengoko unako ukuphuma kurhwebo lwakho nangaliphi na ixesha ngaphambi komhla wokuphelelwa. Akukho kwazi ukuba ikontrakthi yexesha elizayo ibiya kuvalwa njani kanye ngexesha leenyanga ezintathu ezigqityiweyo, ke kulo mzekelo, kwakububulumko ukuthengisa.
IiCFD zexesha elizayo kubarhwebi
Ucinga ukuba ungumrhwebi othengisayo, kuyakufuneka utyale imali kwii-CFD ukuba unqwenela ukufumana ukubonwa kwindawo ezayo. Nangona iiCFD zisebenza ngendlela efanayo, kukho umahluko omnye ophambili- iiCFD aziphelelwa. Kananjalo, iimarike zisebenza iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki, kunye neenyanga ezili-12 ngonyaka.
Apha ngezantsi sidwelise ezinye zezibonelelo ezininzi ezinikezelwa ngabarhwebi bexesha elizayo beCFD.
Okokuqala, abathengisi bexesha elizayo kwindawo ye-CFD bayakuvumela ukuba uqalise ngesixa esincinci. Oku kuqala kwangoko ngenkqubo yedipozithi, njengoko abathengisi bahlala befaka ubuncinci kuluhlu lwama- £ 50- £ 150.
Ngaphaya koko-kwaye okona kubaluleke kakhulu, akukho mfuneko yokuthenga ubuncinci beekhontrakthi. Endaweni yoko, unokuhlala utyala imali encinci njengoko uthanda.
Zonke iarhente zabarhwebi esizicebisayo kweli phepha zikuvumela ukuba ufake isicelo kwixesha elizayo leCFD. Inani elithile oza kuthi urhwebe ngalo lixhomekeke kwindawo okuyo, kunye ne-asethi onqwenela ukuyithengisa.
Umzekelo, ukuba uhlala e-UK okanye kwilizwe lelungu le-European Union, uya kubotshelelwa yimimiselo ebekwe yi-ESMA. Kulabo abangaziyo, oku kuma kumaxabiso aphezulu angama-30: 1 kwi-forex, kunye ne-20: 1 xa kuthengiswa igolide okanye ii-indices ezinkulu njenge-S & P 500.
Oku ke kuyehla kuye ku-10: 1 kuzo zonke izinto zorhwebo kunye nezalathiso ezingezizo ezona ziphambili. Kwinqanaba elisezantsi lesikali, ii-cryptocurrensets ezinje ngeBitcoin kunye ne-Ethereum ziza nemida yokunyusa ye-2: 1. Uya kuthi, ke, ube nakho ukufaka izixa eziphezulu ukuba ungumrhwebi oqeqeshiweyo.
Amawakawaka eeasethi zokuTyala imali kuzo
Enye yeendawo zokuthengisa ezimeleyo zokukhetha indlela yeCFD kukuba uya kuba nokufikelela kumawakawaka ezemali kwiziqwenga zeeklasi zeeasethi.
Iintsimbi ezinzima njengegolide, isilivere, kunye neplatinum
Amandla anjengeoyile kunye negesi yendalo
Iimpawu ezifana ne-S & P 500
Iidijithali zemali ezinjengeBitcoin kunye neRipple
Iimveliso zezolimo ezifana nengqolowa, umbona, kunye neswekile
Izibini zezezimali ezinje nge-GBP / i-USD kunye ne-EUR / GBP
Inzala kunye neebhondi zikarhulumente
Ukukhetha abathengisi bexesha elizayo abagxile kwiiCFD yeyona ndlela yokuthengisa i-asethi emfutshane. Kufuneka ukhethe i-asethi onayo kwi-bearish, faka isibonda sakho, kwaye ubeke i-odolo yokuthengisa.
Abarhwebi bexesha elizayo bayakuvumela ukuba ufake iilahleko zokumisa, ke uya kuba nakho ukunciphisa umngcipheko kwimeko yeemarike ezichasene nawe.
Umzi mveliso wexesha elizayo ugcwele iindleko zokusebenza, ezihlala zisenza inkqubo ebiza kakhulu yokutyala imali. Ngokuchasene noko, abathengi bexesha elizayo abasebenza kwinqanaba le-CFD bayakuvumela ukuba urhwebe ngamaxabiso aphezulu okhuphiswano.
Umzekelo, abanye babathengi bexesha elizayo abadweliswe kweli phepha bayakuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iiasethi ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini. Ngaphezu koko, ukuba uthengisa i-asethi engamanzi kakhulu njenge-S & P 500 okanye igolide, uya kukuqhela ukusasazeka okuqinileyo.
Iintlawulo kwii-Futures Brokers
Xa kuziwa kwinkxaso-mali yeakhawunti yakho, abathengisi bexesha elizayo bahlala bexhasa inani leenketho zokuhlawula imihla ngemihla.
Iindlela zokufaka imali
Eyona ndlela ilula yenkxaso mali yidebhithi okanye ikhadi lekhredithi, njengoko idipozithi yakho iya kufakwa kwangoko. Le ikwayimeko ye-e-wallets eyaziwayo njenge-Paypal kunye ne-Skrill, nangona inkxaso ingaqhelekanga kwindawo yexesha elizayo.
Ngenye indlela, unokufaka imali kwiakhawunti yebhanki. Nangona kunokuthatha iintsuku zokusebenza eziyi-1-3 ukuze imali ifakwe kwikhredithi, uhlala unikwa imida ephezulu.
Ngelixa i-future brokers esiyicebisayo ikuvumela ukuba ubeke imali ngaphandle kokuhlawula nayiphi na intlawulo, amanye amaqonga aya kunyanzelisa intengiselwano. Ukuba bayakwenza, oku kuhlala kuyipesenti yemali onqwenela ukuyifaka.
Umzekelo, ukuba umthengisi wexesha elizayo ubiza i-1.5% kwiidipozithi zeVisa- kwaye uhlawula iakhawunti yakho nge- £ 1,000- kuyakufuneka uhlawule umrhumo we- $ 15. Oku kuhlala kuthatyathwa kwimali oyifakileyo, ke kulo mzekelo, uya kushiyeka ngemali eseleyo ye- $ 985.
Ngokumalunga nokufumana imali yakho kwi-broker yexesha elizayo, kuya kufuneka uyirhoxise imali uyibuyisele kwakule ndlela ubukade uyifaka. Oku kukuqinisekisa ukuba umrhwebi uyayithobela imithetho echasene nemali.
Ngaphambi kokuba ucele ukurhoxiswa, kuya kufuneka udlule kwinkqubo ye-KYC (Yazi uMthengi wakho). Oku kufuna ukuba umthengisi wexesha elizayo aqinisekise isazisi sakho. Unokwenza oku ngokufaka ikopi yepasipoti yakho okanye iphepha-mvume lokuqhuba.
Nje ukuba wenze, abathengi bexesha elizayo bahlala becwangcisa izicelo zokurhoxa ngaphakathi kweeyure ezingama-24-48. Uya kuthi emva koko ulinde umnikezeli wekhadi elifanelekileyo, umboneleli we-e-wallet, okanye ibhanki ukubolekisa ngemali erhoxisiweyo.
Ndingalifumana phi elona Bhizinisi liSebenzayo?
Ke ngoku ukuba uyazi i-ins kunye nokuphuma kwendlela ezakusebenza ngayo ikamva lesiko- kwaye njengomthengisi uza kuthengisa nge-CFDs, ngoku kufuneka uqale ngokucinga ngomthengisi wakho omkhethileyo.
Ukuba ujonga ukuphanda umrhwebi kwi-DIY ngesiseko, singacebisa ukuba senze ezi zinto zilandelayo ngaphambi kokubhalisa.
Akunakuze, kwaye sithetha ze sayina kunye nomthengisi wexesha elizayo ongalawulwa. Ngapha koko, nokuba kulawulwa, usadinga ukuvavanya ukuthembeka komkhuphi welayisensi. Umzekelo, sicebisa kuphela abathengisi abalawulwa yimizimba eminye.
Oku kubandakanya ukuthanda kwe-UK FCA, kunye nemibutho yolawulo e-Australia (ASIC), ISingapore (MAS), kunye neCyprus (ICSSEC). Oku kuthetha ukuba iimali zakho ziya kuhlala zikhuselekile ngalo lonke ixesha, hayi ubuncinci kuba umrhwebi kuyakufuneka ahambelane noluhlu lweemeko zelayisensi.
Kubalulekile ukuba uvavanye ukuba zeziphi iindlela zedipozithi ezixhaswa ngumthengisi wexesha elizayo. Emva kwayo yonke loo nto, akukho nto imbi ngaphezu kokungena kwinkqubo yokubhalisa kunye nenkqubo yokuqinisekisa kuphela ukuba indlela yakho yokuhlawula kuphela ayifumaneki.
Endaweni yoko, kuya kufuneka ujonge le ngaphambi kokuvula iakhawunti. Ungalibali, kuya kufuneka uphinde uphonononge ukuba yeyiphi eyona mali incinci yedipozithi, nokuba kukho naziphi na iifizi ezisebenzayo.
Uluhlu lweCFD lwexesha elizayo
Xa kuziwa kwisebe lezorhwebo ngokwalo, kuya kufuneka uvavanye ukuba yeyiphi i-asethi uluhlu lwabathengi bexesha elizayo. Kwimeko ezininzi, abarhwebi bexesha elizayo ababonelela ngeCFDs baya kubamba amawaka ezixhobo zemali. Kananjalo, kuya kufuneka ukwazi ukurhweba uninzi lweeklasi zeeasethi.
IiKhomishini zoRhwebo kunye nokuSasazeka
Sikhetha abathengisi bexesha elizayo abakuvumela ukuba urhwebe ngaphandle kwekhomishini. Oku kunokwenzeka ngenxa yokwenziwa kweeCFD. Ngamanye amagama, njengoko iiCFDs zilandelela nje ixabiso lentengiso yokwenyani yeasethi, umrhwebi ekuthethwa ngaye akanyanzelekanga ukuba athathe ubunini.
Ngokufanayo, kuya kufuneka usebenzise i-future brokers ezinikezela ngokusasazeka okuqinileyo. Lo ngumahluko phakathi kokuthenga nokuthengisa ixabiso leasethi, kwaye kuyokwahluka ngokuxhomekeke kwinto oyithengisayo. Ekugqibeleni, usebenzisa i-future-free broker broker enikezela ukusasazeka kukhuphiswano, uya kugcina iindleko zakho zorhwebo zisezantsi.
Kuya kufuneka uqinisekise ukuba umthengisi wexesha elizayo unikezela isebe elaneleyo lenkonzo yabathengi. Oku kufanele kubandakanya ingxoxo ebukhoma, i-imeyile, kunye nenkxaso yefowuni- ngokukhethekileyo ejikeleze iwotshi.
Izixhobo zoPhando kunye noHlolo oluSisiseko
Ngokusebenzisa izixhobo zophando kwi-future broker yakho oyikhethileyo, uya kuma elona thuba lilungileyo lokufumana inzuzo yexesha elide. Oku kuhlala ngokwamacandelo amabini- zobugcisa uhlalutyo kunye siseko hlalutyo.
Izinto zangaphambili zizabalazela ukuhlalutya iipateni zetshathi eyimbali, nendlela oku okunokuba nefuthe ngayo kwicala elizayo le-asethi. Kananjalo, uya kufuna ukusebenzisa umthengisi wexesha elizayo onikezela iimfumba zezalathi zobugcisa. Kwelinye icala lesiphelo, uhlalutyo olusisiseko lusekwe kwiziganeko zeendaba zokwenyani zehlabathi.
Umzekelo, ukuba kubhengeziwe e-US ukuba kuninzi kakhulu kwengqolowa, lindela ukuba ixabiso le-asethi lehle. Ke ngoko, khetha umrhwebi ohambisa iindaba ezisisiseko ngexesha langempela.
Ixesha elizayo Abarhwebi: Ungaqala njani
Ke ngoku xa sele sichazile ukuba abarhwebi bexesha elizayo basebenza njani, ngoku siza kukunika isikhokelo ngenyathelo ngenyathelo malunga nendlela onokuthi uqale ngayo ngeakhawunti namhlanje.
Inyathelo 1: Khetha uMthengisi wexesha elizayo
Kukho amakhulu abarhwebi bexesha elizayo abasebenza kwindawo yokuthengisa. Ngaba bonke banikezela ngenkonzo yenotshi ephezulu? Ngokuqinisekileyo akunjalo. Kananjalo, sicebisa ukuba siphonononge iingcebiso ezichazwe kwicandelo elingentla ukuze ufumane umthengisi ohlangabezana ngokufanelekileyo neemfuno zakho.
Ukuba awunalo ixesha loku, uzakufumana abaxhasi bethu abahlanu abakwiqondo eliphambili abadweliswe emazantsi ephepha. Umrhwebi ngamnye ulawulwa kakhulu kwaye unikezela ngamawaka ezixhobo zemali ukuba uhambe ixesha elide okanye elifutshane.
Bonke abathengisi bexesha elizayo kwi-Intanethi baya kukucela ukuba uvule iakhawunti ngaphambi kokuba uqale ngokurhweba. Kananjalo, kuya kufuneka ubonelele ngolwazi olusisiseko lomntu siqu.
Uya kucelwa ukuba uqinisekise iakhawunti yakho. Kwakhona, oku kukulwa izoyikiso zokuxhaphaza imali kunye nokuqinisekisa ukuba umrhwebi uyayithobela imizimba yakhe yokufumana iilayisensi. Kananjalo, kuya kufuneka ulayishe ikopi yakho yokundwendwela okanye iphepha-mvume lokuqhuba. Uninzi lwabarhwebi bexesha elizayo banokuqinisekisa amaxwebhu kwangoko.
Ngoku kuya kufuneka ubeke imali kwiakhawunti yakho yomthengisi. Iindlela zokuhlawula ezikhoyo ziya kuxhomekeka kumrhwebi oyisebenzisayo, yiyo loo nto sicebisa ukuba ujonge oku ngaphambi kokuvula iakhawunti.
Nangona kunjalo, abathengisi banikezela ngenkxaso kwezi ndlela zilandelayo zokuhlawula:
Inyathelo 4: Fumana intengiso yeCFD yexesha elizayo
Njengomrhwebi othengisayo, uya kuba utyala imali kwikontrakthi yexesha elizayo ngeCFD. Ungalibali, ii-CFD aziphelelwa lixesha, ukuze ungene kwaye uphume kwintengiso nanini na ubona kufanelekile.
Ukufumana ukuqengqeleka kwebhola, yiya kwisebe leCFD kwindawo yomthengisi, kwaye ukhethe udidi lweeasethi onomdla kuzo kurhwebo. Umzekelo, ukuba ufuna ukurhweba ngekamva legolide, jonga icandelo 'lezinyithi ezixabisekileyo'.
Kuya kufuneka ngoku ube kwiphepha lokuthengisa kwintengiso oyikhethileyo. Njengoko iiCFD zexesha elizayo ziyimveliso yorhwebo ephucukileyo, uya kunikwa uluhlu lweenketho zotyalo-mali. Oku kuthetha ukuba kuyakufuneka ugcwalise ifom yoku-odola.
Oku kunokoyikisa ekuqaleni, ke qiniseka ukubuyela kula manqaku achazwe ngezantsi.
Thenga / thengisa iodolo: Okokuqala, kufuneka ukhethe ukuba ucinga ukuba zeziphi iindlela eziza kuthengiswa ziimarike. Ukuba ufuna ukuhamba ixesha elide-okuthetha ukuba ucinga ukuba i-asethi iya kunyuka ngexabiso, khetha 'i-oda yokuthenga'. Ukuba ucinga okwahlukileyo, khetha 'ukuthengisa ukuthengisa'.
Isiteki: Kuya kufuneka uchaze ubungakanani botyalo-mali lwakho. Qaphela, awudingi ukungena kwisibonda sakho ngenani lezivumelwano onqwenela ukuzithenga okanye ukuzithengisa. Endaweni yoko, yongeza nje imali ngeepawundi kunye neepeni (okanye imali yendawo yakho).
Umyalelo weNtengiso / umda: Ukuba ucwangcisa ukungena kwintengiso yexesha elizayo xa i-asethi ifika kwixabiso elithile, khetha 'umda wokuyalela'. Umzekelo, ukuba ioyile ibiza ama- $ 25, kodwa ufuna ukuhamba ixesha elide xa ubetha ama-24 eedola, umda wokuyalela unokukunceda oku. Ngenye indlela, 'iodolo yentengiso' iya kwenza urhwebo lwakho kwixabiso elilandelayo elilandelayo.
oluxhathisayo: Ukuba unokunyamezelana okuphezulu kancinci kumngcipheko, abathengisi bexesha elizayo bayakuvumela ukuba usebenzise amandla. Khetha ngokulula inani onqwenela ukulifaka- njenge-2x, 3x, 4x, njl.
Ukuyeka ukulahleka: Elinye lawona macandelo abaluleke kakhulu kwifom yakho yoku-odola kukuqinisekisa ukuba unciphisa ilahleko yakho. Oku kunokwenziwa ngokuseta i-odolo yokulahleka. Ngenisa ixabiso onqwenela ukuba urhwebo luvalwe ukuba iimarike zichasene nawe. Ukhuseleko olongeziweyo, hlawula imali eyongezelelweyo ukufakela i-odolo yokumisa ilahleko 'eqinisekisiweyo'.
Okokugqibela-kuxhomekeke kuhlobo lweodolo obeka kuyo-cofa kwindawo ethi 'thenga' okanye 'uthengise' ukwenza urhwebo lwakho lwexesha elizayo.
Inyathelo 6: Ukuhlawula urhwebo lwakho lwexesha elizayo
Njengoko siphawulile kwisikhokelo sethu sonke, ikamva le-CFD alinawo umhla wokuphelelwa kwaye ngenxa yoko-ikuvumela ukuba ungene kwaye uphume kwintengiso nanini na ufuna. Oku kuthetha ukuba xa iodolo yakho ihleli, ungaphuma kuyo ngokucofa iqhosha.
Ke, ukuba ubeke i-oda yokuthenga, kuyakufuneka ubeke i-odolo yokuthengisa ukuze uvale urhwebo lwakho- kunye ne-visa-versa ukuba uhambe mfutshane. Nje ukuba ulukhuphele ngaphandle utyalo-mali lwakho, iimali ziya kuthi zifakwe kwangoko kwiakhawunti yakho yomthengisi.
Abarhwebi bexesha elizayo baPhambili-Abarhwebi bethu aba-5 abaPhezulu ngo-2022
Ukuba awunalo ixesha lokuphanda nge-future broker ngokwakho, apha ngezantsi uzakufumana amaqonga ethu aphezulu anesihlanu aphakamileyo ka-2022.
Ukucacisa, umrhwebi ngamnye:
Ilawulwa ubuncinci lilungu elinye elinelayisensi
Inika amawaka eemarike zekamva ngeCFDs
Ixhasa iimfumba zeendlela zokuhlawula
Ukuququzelela ukurhweba kwikamva ngexabiso eliphantsi
Isishwankathelo, nangona ixesha elizayo liyindawo yemfazwe yeebhiliyoni ezigidi, ukufikelela kubathengisi bemihla ngemihla kuthengiswa kakhulu. Nangona kunjalo-kwaye njengoko sigubungele sonke isikhokelo, indawo elula yokusebenza kukusebenzisa i-intanethi kwikamva lomthengisi ojolise kwiiCFDs.
Uya kuba nakho ukuqikelela kumawakawaka ezixhobo zemali, kwaye uya kuba nokukhetha ukuthengisa ngokufutshane kunye nokusebenzisa amandla. Umahluko omkhulu kuphela kukuba ikamva le-CFD alinawo umhla wokuphelelwa.
Ngale nto ithethwayo, singaphikisana ukuba esi sisibonelelo - kuba awunyanzelekanga ukuba ukhuphele ngaphandle utyalo-mali lwakho. Ngokuchasene noko, unokugcina indawo yakho ivulekile okoko ufuna.
Yintoni i-CFD future broker?
I-CFD yexesha elizayo umrhwebi ikuvumela ukuba uqikelele kwakweeasethi ezifanayo eziza kulandela umkhondo, nangona kunjalo, zikwimo yeCFD. Oku kuthetha ukuba ikhontrakthi yexesha elizayo ayizukuphelelwa ngumhla.
Yeyiphi eyona dipozithi incinci kubathengi bexesha elizayo kwi-Intanethi?
Oku kuxhomekeke kubroker wexesha elizayo. Ngelixa ezinye zikuvumela ukuba uqalise ngokufaka nje i- $ 50, ezinye zifuna i- $ 250 okanye nangaphezulu.
Kutheni le nto kufuneka ndifake i-ID ukuze ndisebenzise umthengisi wexesha elizayo kwi-Intanethi?
Oku kukuqinisekisa ukuba umthengisi wexesha elizayo uyayithobela imithetho ejikeleze ukungahanjiswa kwemali ngokungekho semthethweni. Ngenxa yoko, kuya kufuneka ulayishe ikopi yepasipoti yakho okanye iphepha-mvume lokuqhuba ngaphambi kokuba kuvunyelwe ukurhoxa.
Zeziphi iimali ekufuneka ndizibhatale xa ndisebenzisa iarhente yexesha elizayo kwi-Intanethi?
Ubuncinci, kuya kufuneka uhlawule umrhumo ongathanga ngqo ngohlobo 'lokusasazeka'. Lo ngumahluko phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa ixabiso lesivumelwano sexesha elizayo. Ngapha koko, abanye abathengisi baya kukuhlawulisa ikhomishini ngalo lonke ixesha ubeka urhwebo. Ukuba bayayenza, ihlala iyipesenti encinci yobungakanani bakho kurhwebo.
Ngaba i-future brokers ilawulwa?
Ewe, uninzi lwabathengi bexesha elizayo bakulawulwa yimizimba efana neCCA okanye iCySEC. Ngokubalulekileyo, ukuba umrhwebi akalawulwa, kuya kufuneka uyithintele kuzo zonke iindleko.
Zeziphi iiasethi abathengisi bexesha elizayo beCFD ekuvumela ukuba urhwebe ngazo?
Ngenxa yokukhululeka apho iiCFD zinokulandela umkhondo wamaxabiso exesha elizayo, iarhente yabathengi ikunika ukufikelela kumawaka ezixhobo zemali. Oku kubandakanya yonke into evela kwizinto zorhwebo, ii-indices, amaxabiso enzala, iibini ze-forex kunye nee-cryptocurrensets.
Kuthetha ntoni ukuthengisa ngokufutshane ikhontrakthi yekamva?
Ukuba ubunokuthengisa kancinci ikhontrakthi yekamva, oko kuthetha ukuba uqikelela kwixabiso leasethi eliya ezantsi.